Catlin Inishuwarenzi Boka Inovandudza BI Management & Kudzora ne MotioCI - Motio
Catlin Inishuwarenzi Boka Inovandudza BI Management & Kudzora ne MotioCI
Jan 28, 2021Case Studies, inishuwarenzi, MotioCI
MotioCI Inotarisira Catlin Kukura kweCognos Implementation
BI muInishuwarenzi Indasitiri
Catlin Group Limited, iyo yakawanikwa neXL Boka muna Chivabvu 2015, inyanzvi yepasirese uye yekukuvara inishuwarenzi uye zvakare-inishuwarenzi, kunyora pamusoro makumi matatu mitsara yebhizinesi. Catlin ine nzvimbo nhanhatu dzekunyora dziri muUK, Bermuda, United States, Asia Pacific, Europe neCanada. Catlin ine timu yepasirese ine vanopfuura vanopfuura mazana maviri nemazana mana vanonyora pasi, maactuaries, nyanzvi dzezvakataurwa, nevashandi vekutsigira. Iyo inishuwarenzi indasitiri inotarisana nekugadzirisa njodzi. MaInishuwarenzi anopiwa basa rekuona nekuyera izvo "ko dai" zvine chekuita nenjodzi dzevanhu nedzezvakasikwa uyezve voita sarudzo dzakanaka dzebhizinesi zvichibva pane akasiyana aya. Chinangwa cheinishuwarenzi hachisi chekubvisa njodzi, asi kuinzwisisa nekuibata nemazvo. Iyo inishuwarenzi indasitiri inobata nevhoriyamu yedata kubva kwakasiyana masosi sosi kuitira kuti itore sarudzo dzakakodzera nguva, ipe yepamusoro sevhisi kune vatengi vayo, uye irambe ichikwikwidza. Muna 30 Catlin akaita danho rekugadzirisa mashandiro aro eManagement Information Systems, ayo aisanganisira zveBusiness Objects, uye kufambisa kune chikuva chakazara nehumwe hunyanzvi uye pachena mubhizinesi ravo. Catlin akasarudza IBM Cognos.
Zvipingamupinyi muBI Kukura
Kuenda kuCognos kwakawedzera kugona kweCatlin nharaunda yeBI zvakanyanya, izvo zvakatendera Catlin kusangana zvirinani nezvikumbiro zvezvikwata nevashandisi vebhizinesi. Sezvo nechero indasitiri, iyo bhizinesi divi inoda uye inoda ruzivo nekukasira, asi IT inoda kuona izvo zvavanopa ndezvechokwadi uye zvakavimbika. Mune indasitiri inodzorwa zvakanyanya senge inishuwarenzi, izvi zviyero hazvigone kukanganiswa. Catlin's BI timu iri munzvimbo yakapararira muUK, India, uye United States. Basa rekuvandudza uye rekuyedza kuCatlin rakagovaniswa uye rakapararira pakati penzvimbo nhatu idzi. Kukura nekukura kwenzvimbo nyowani yeBI paCatlin, pamwe nekuwedzera kwekutorwa kwevashandisi kwakatanga kuburitsa nyaya dzine chekuita nekwanisi yeBI manejimendi kuitisa uye ichiri kupa ruzivo rwakakodzera panguva pasangano rose. Idzi nyaya dzakatanga kukanganisa kukanganisa budiriro, kuburitsa nguva, uye kugona kukurumidza kuchinjisa nyowani kana kuvandudzwa kweBI zvemukati kugadzirwa. Catlin akaziva kukosha kwekushandisa kudzora kwakawanda pamusoro pemapoka ayo akaparadzaniswa uye kugadzirisa zvinotevera zvinoda kutarisirwa kwehupenyu.
Kudzora kwezvinhu zveBI uye shanduko / dev manejimendi
Managed nzira yekusimudzira zvemukati pakati penzvimbo
Hunhu kudzora pamusoro pebasa rekuvandudza - kuona chokwadi, kuvimbika, uye kuenderana
Kugona kunyatso fungidzira mashandiro uye kuyera kukanganiswa kwekuvandudzwa kutsva
Chinyorwa kune Yakagadziriswa BI Promotions
Imwe nzira kuCatlin iyo yaifanirwa kugadziriswa pakarepo yaive nzira iyo BI zvemukati zvakasimudzirwa kuita nharaunda nyowani. Asati MotioCI, vanhu vaviri chete musangano rese ndivo vakapiwa mvumo yekusimudzira zvirimo zveBI kubva mukuvandudza kusvika pakuyedza (QA) uye kunzvimbo dzekugadzira. Maitiro aya akakonzera kudonha kwakakosha mukutora nyowani kana kuvandudzwa kweBI zvemukati mumaoko evashandisi vekupedzisira nenzira yakakodzera. Catlin yakamisikidzwa nyaya dzekuendesa dzakagadziriswa padhuze nepadyo-yekuzvishandira promotion uye vhezheni yekudzora maficha e MotioCI. Iine vhezheni yekudzora inogoneswa, yega yega yefa asset inosimudzirwa kuCatlin inogona kuteverwa kumashure kune akaikurudzira, payakasimudzirwa, uye ndeipi vhezheni yakasimudzirwa. Shanduro yekudzora uye yekuburitsa manejimendi pamwechete yakapa simba vazhinji vevashandisi veCognos kuCatlin nebasa reAd-hoc uye rekuburitsa-based deployments vachiri kuchengetedza hutongi uye kutonga kwese kuita kweBI.
Chengetedza Kurongeka neKuyedza & Shanduro Kudzora
Mune indasitiri yeinishuwarenzi, kumonyororwa kwedatha kunozivikanwa pakati pevashandisi vekupedzisira senge maactuaries, nechinangwa chekuongorora kukanganiswa kwezvikwereti zvinobhadharwa. Kuvimba nekururama kwakakosha kune vashandisi vekupedzisira vanovimba nezvinhu zvakapuwa nechikwata cheBI. Pamberi MotioCI, iyo nguva yenguva inodiwa yekumisikidza yemhando yekuvimbisa cheki pane BI zvemukati zvakagadzirwa o? mahombekombe akatanga kukanganisa kugona kwaCatlin kukudziridza, kuyedza, uye kuburitsa nyowani yezvinyorwa zveBI nenzira isinganetsi. Catlin yaita MotioCI kuyedza kugadzirisa uye kudzora mhando yebasa rekuvandudza, iro rakadzora zvakanyanya nguva yakashandiswa pane iri basa. Kuedzwa kunoderedza zvakanyanya huwandu hwemishumo nezvikanganiso zvinounzwa kune vashandisi vekupedzisira, izvo zvinoderedza iyo nguva inoshandiswa pazvinhu zvekutsigira uye nekuvandudza ruzivo rwevashandisi vebhizinesi. Ivo vaviri timu yeBI uye vashandisi vekupedzisira kuCatlin vanogona kuvimba neBI zviwanikwa mune zvavo zvezuva nezuva, vachiziva ruzivo rwavari kushanda narwo rwakaedzwa rwechokwadi asi runogona kudzoreredzwa kumashure kune zvekare shanduro pasina kuzengurira.
Mhedzisiro Inunurwa ne MotioCI
Mugore rekutanga rekushandisa MotioCI, Catlin akabatsirwa kubva pane zvinotevera seyakadzora vhezheni, kuburitsa manejimendi, uye otomatiki ekuyedza maficha:
Nzira yakajeka-yakatemwa yekugadzirisa akapararira maBI zvikwata nenzvimbo
Yakaderedzwa nguva yekuvandudza
Kuwedzera huwandu hweBI zvinhu zvakaiswa mukugadzirwa
Kuvimba kukuru mukururama kwezvinyorwa zveBI
Kuvandudzwa kugutsikana pakati pevashandisi vekupedzisira
Mukati megore rekutanga ra MotioCI, Catlin yakaderedza nguva yekuvandudza uye yakawedzera huwandu hweBI zvinhu zvakaiswa mukugadzirwa. Mhedzisiro mukuwedzera kwakanyanya kweaseti uye nekugadziriswa kwekupedzisira kwemushandisi kugutsikana
Catlin akatendeukira kuna MotioCI kubata kwavo kweCognos kuitiswa. Dzavo nyaya dzekuendesa dzakagadziriswa padhuze nepadiki. Vakatsiva yavo yemanyorerwo nzira yezvinyorwa promotions MotioCI'' yekuzvishandira promotion kugona. Iko kusanganiswa kweshanduro kudzora, kuburitsa manejimendi, uye kuyedza kugona izvo MotioCI yakapihwa, yakabatsira Catlin kuwana mhedzisiro munzvimbo idzi:
Yakagadziridzwa manejimendi ezvikwata zveBI nenzvimbo
Kuwedzera huwandu hwezvinhu zveBI zvakaburitswa mukugadzirwa
Yakasimudzira kuvimba neBI yezvakanaka kurongeka
Yakasimudza magumo mushandisi kugutsikana